अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा नेपाली प्रविधि 'वर्षा पम्प' लाई सफलता - Tech News Nepal Tech News Nepal
बुधबार, बैशाख २२, २०७८ १९:५१
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा नेपाली प्रविधि ‘वर्षा पम्प’ लाई सफलता
काठमाडौं । विश्वमै लोकप्रिय वर्षा-पम्पको निर्माण कम्पनी अक्वेस्टा नेपालले वाटर एण्ड एनर्जी फर फुड (डब्लुईफोएफ) ग्राण्ड च्यालेन्जमा विजय हासिल गरेकाे छ ।
साउथ एण्ड साउथ इस्ट एसिया रिजनल इनोभेसन हबले आयोजना गरेको उक्त च्यालेन्जमा समग्र क्षेत्रबाट नेपालको अक्वेस्ट लगायत अन्य १० कम्पनी विजेता बनेका हुन् ।
सो च्यालेन्जमा कृषि खाद्य उत्पादनलाई सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले पानी तथा उर्जामा आधारित रही निर्माण भएका प्रविधिहरुबीच प्रतिस्पर्धा गरिएको थियो । जसमा दक्षिण एसिया तथा दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रका विभिन्न मुलुकहरुको सहभागिता थियो ।
सोही च्यालेन्जमा नेपालको अक्वेस्टा नेपाल प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी अग्रस्थानमा आएको कम्पनीका प्रमुख सुजन दुलालले जानकारी दिएका छन् ।
उक्त प्रतिस्पर्धाको कूल राशी २० लाख डलरको छ, जुन ११ जना प्रतिस्पर्धीहरुलाई दिइनेछ । पुरस्कार राशी आयोजकले गर्ने निड एसेसमेन्टको आधारमा प्रदान गरिने हुँदा कुन विजेताले कति पाउने भन्ने कुरा पछि निर्क्यौल हुने बताइएको छ ।
विजेता टिमलाई पुस्कार राशीका साथै प्राविधिक सहयोग र सिकाई पनि प्रदान गरिने बताइएको छ ।
सो च्यालेन्जमा अक्वेस्टा नेपालले आफ्नो पुरानो वर्षा-पम्पकै आधुनिक तथा परिस्कृत डिजाइन हाईपम्पलाई प्रस्तुत गरेको थियो । यस पम्पले पनि पुरानो पम्पले जस्तो खोला तथा नहरबाट पानी तानेर खेतमा सिचाईं गर्दछ । यसमा कुनै इन्धन वा विद्युत उर्जाको प्रयोग हुँदैन ।
यसअघिको वर्षा-पम्पको तुलनामा यसको क्षमता धेरै छ । वर्षा पम्म २० मिटर उचाइसम्म पानी तान्न सक्थ्यो भने अहिलेको हाई पम्प प्रविधिले दुई सय मिटरसम्म पानी तान्न सक्छ । त्यस दिनमा एक हेक्टर जमिन सिचाईं गर्थ्यो भने अहिले यसले दैनिक ४० हेक्टर जमिन सिचाईं गर्न सक्छ ।
अक्वेस्टाले निर्माण गरेको वर्षापम्प हाल २३ मुलुकमा प्रयोग भइरहेका छन् । नयाँ हाईपम्प निर्माण कार्य कम्पनीले सकिसकेको छ भने यसलाई व्यवसायिकरुपमा इन्स्टल गर्ने काम बाँकी रहेको सुजनले टेकपानालाई सुनाए ।
काठमाडाैं । गत वर्ष एप्पलले आफ्ना प्रयाेगकर्तालाई गरेकाे वाचा यस वर्षकाे वर्ल्ड वाइड डेभलपर कन्फ्रेन्समार्फत
काठमाडाैं । विगत साढे दुई वर्षदेखि पुस्तकलाई प्रविधिसँग जोड्दै पुस्तकको उपलब्धताको प्रवर्द्धनमा लागेको ‘थुप्रै डटकम’ले
काठमाडौं । सिजी इन्टरनेटले बजार मूल्यभन्दा आधा सस्तोमा दोब्बर स्पिडको इन्टरनेट दिन सुरु गरेसँगै नेपालको
भीपीएन के हो र यसले कसरी काम गर्छ ?
काठमाडौं । के तपाईं अनलाइन सेक्युरिटी वा प्राइभेसीको विषयलाई लिएर चिन्तामा हुनुहुन्छ ? अथवा आफ्नो